धान – Himalaya Television
धान उत्पादन पाँच वर्षयताकै कम, कुन प्रदेशमा कति उत्पादन ?
१९ पुस २०७८ काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धान उत्पादनमा कमी आएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षयताकै धान उत्पादनमा कमी आएको जनाएको हो । मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष...
धानको पूजा गरी मनाइँदै धान्य पूर्णिमा, योमरी पुन्हि पनि आजै
४ पुस २०७८ काठमाडौं । मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज धानको विधिपूर्वक पूजाआजा एवं दान गरी धान्यपूर्णिमा पर्व मनाइँदै छ । मङ्सिरमा धान भित्र्याएपछि शुक्ल पूर्णिमामा धान, गणेश, कुलदेवता, गैडु देवता, गोठ देवता, महारुद्र, महालक्ष्मीलगायत देवताको पनि पूजा गरी...
बाँकेका किसानले किन पाएनन् धानको न्यूनतम मूल्य ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
३० कात्तिक २०७८ बाँके । सरकारले २०७८ भदौ २९ गते धानको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारी स्वामित्वमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अझै धान खरिद शुरु गरेको छैन । खाद्य कम्पनीले धान खरिद शुरु नगर्दा बाँकेका किसानले धानको न्युनतम...
पाल्पाका किसान परम्परागत शैलीमा धान भित्राउँदै (भिडियो रिपोर्टसहित)
२९ कात्तिक २०७८ पाल्पा । पाल्पाका ग्रामीण क्षेत्रमा यतिबेला परम्परागत शैलीमा धानबाली स्याहार्ने चटारो शुरु भएको छ । अहिले बेमौसमी वर्षाबाट जोगिएको धानबाली स्याहार्न खेतमा किसान व्यस्त छन् । धानबाली भित्राउन अर्मपर्ममा मात्रै सीमित हुनुपर्दा किसानलाई समस्या भएको छ...
बेमौसमी वर्षाले धान नष्ट भएपछि किसान चिन्तित (भिडियो रिपोर्टसहित)
२७ कात्तिक २०७८ चितवन । कार्तिक महिनाको पहिलो साता लगातार तीन दिन पानी पर्‍यो । पानीले काटेर सुकाएको धान भिजेर बिग्रियो भने सग्लै रहेका धान पनि ढलेर नष्ट भयो । चितवनमा पाक्न बाँकी रहेको धान समेत बेमौसमी वर्षाले नष्ट...
धानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने
११ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । सरकारले वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म...
धान खेतमै उम्रिन थाल्यो, डुबाएको धान काटेर सुकाउन विज्ञको सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)
९ कात्तिक २०७८ बाँके । अविरल वर्षा पछि आएको बाढीले डुबाएको धान खेतमै उम्रन थालेको छ । तीन दिनसम्म भएको भीषण बर्षाका कारण खेतमै डुबेका धानका बोट कुहिएका छन् । मौसममा सुधार भई घाम लाग्न थाले पनि किसानले पानीमा...
८ कात्तिक २०७८ तम्घास । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–६ अम्मरपुरकी दुर्पता भण्डारी परिवारले आफ्नो छ रोपनी खेतमा असारको मध्यतिर धान रोप्नुभयो । उक्त धान अहिले काट्ने समय हो । यसैले असोज २९ गते खेताला लगाएर धान काट्नुभयो । लगत्तै बेमौसमी...
४ कात्तिक २०७८ महोत्तरी । दसैँ र मोहम्मदको पर्व मनाएसँगै महोत्तरीका किसान गम्भीर चिन्तामा परेका छन् । हिन्दू परम्पराको दसैँ सकिनैलाग्दा र इस्लाम परम्पराको महत्वपूर्ण पर्व मोहम्मद डे मनाइरहँदा गत मङ्गलबार परेको बेमौसमी वर्षाले यहाँका किसान गम्भीर चिन्तामा परेका...
झापामा धान गोड्न हाँसको प्रयोग, किसान उत्साहित
४ भदौ २०७८ झापा । झापामा धान गोड्न हाँस प्रयोग गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्यान्न बैँक लिमिटेडले बर्दिया, झापा लगायतका जिल्लामा धान गोडमेलका लागि हाँस पालनको अवधारणा ल्याएको थियो । सोही अनुसार परीक्षण अन्तर्गत झापा...